Kembangan Group of Medical Centres | ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ
ဆီးနှင့် ကျောက်ကပ် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ
ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အထွေထွေရောဂါများ ကုသခြင်း
ဆီးကြိတ်ကြီး/ဆီးကြိတ်ရောင်/ဆီးကြိတ်ကင်ဆာ/ဆီးပူ/ဆီးကျင်/ဆီးအောင့်/ဆီးထဲသွေးပါခြင်း/ဆီးလမ်းကြောင်းနှင့် ကျောက်ကပ်အတွင်းရှိသော ကျောက်များချေခြင်း
အမျိုးသားများ ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်းက ဘာလည်း?
ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း ရောဂါဟာ အသက်ကြီးပိုင်း အမျိုးသားများမှာ အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း ဆိုသည်မှာ အမျိုးသားများ အသက်ကြီး လာတာနဲ့အမျှ ဟော်မုန်း အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ခြင်းနှင့် သဘာဝ တရားအရ အိုမင်း ရင့်ရော်မှု ဖြစ်စဉ်များထဲမှ တစ်ခုပဲဖြစ်ပါသည်။ ဆီးကျိတ်ဟာ ဆီးလမ်းကြောင်းရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဝန်းရံထားပါတယ်။ဆီးကျိတ်ဟာ ပုံမှန်ထက် ကြီးလာမယ် ဆိုရင်တော့ ဆီးလမ်းကြောင်းကို သွားဖိနေတတ်ပြီး အောက်ပါ ဝေဒနာ လက္ခဏာများကို ခံစားရလေ့ရှိပါသည်
ဘယ်လို လက္ခဏာများခံစားရပါလည်း ?
ဆီးသွားရ ခက်ခြင်း၊ ဆီးသွားပီးပါက ဆီးမကုန်သလို ခံစားရခြင်း ၊ ဆီးတစ်စက် တစ်စက် ကျနေခြင်း ၊ ဆီးလုံးသေးခြင်း ၊ ညဖက် ဆီးခဏခဏ သွားခြင်းနှင့် ဆီးမထိန်း နိုင်ခြင်း အစရှိသည့် လက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါသည်။
ဆီးကျိတ် ကြီးခြင်း ရောဂါကို ကုသမှု မခံယူပါက ဆီးပိုးဝင်ခြင်း၊ ဆီးထဲ သွေးပါခြင်း၊ ဆီးလုံးဝ မထွက်တော့ခြင်း၊ ဆီးအိမ် ဖောင်းလာခြင်း၊ ကျောက်ကပ် ဖောရောင် ထိခိုက်ခြင်း၊ ဆီးကျိတ်ရောင်ခြင်းများ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ဆီးကျိတ် ကြီးခြင်းဟာ သာမန် ကြီးခြင်း အပြင် ဆီးကျိတ် ကင်ဆာကြောင့် ကြီးနေခြင်းမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း ရောဂါကို ကြိုတင် သိရှိပြီး ထိထိရောက်ရောက် ကုသမှု ခံယူရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း ရောဂါ လက္ခဏာများ တစ်ခုခုခံစားနေရပီ ဆိုပါက ရောဂါကို တတ်ကျွမ်းနားလည်သည့် ဆရာဝန်များနှင့် ပြသကာ စစ်ဆေးမှု များ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဆီးကျိတ်ကို တတ်ကျွမ်းသည့် ဆရာဝန်များနှင့် စမ်းသပ်ခြင်း ဆီးကျိတ်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်သည့် သွေးစစ်ဆေးခြင်း၊ ဆီးကျိတ်အရွယ်အစားကို သိရှိနိုင်ရန် တယ်လီဗွီးရှင်း ဓါတ်မှန် ရိုက်ခြင်းများကို ပြုလုပ်၍ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်းအတွက် ကုသမှုများမှာ သောက်ဆေးမှ စ၍ ခွဲစိတ်ကုသသည်အထိ ဆီးကျိတ်အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ အဆင့်ဆင့်ရှိပါသည်။ နားလည်တတ်ကျွမ်း သည့် ဆီးနှင့် ကျောက်ကပ် အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍ နောက်ဆုံးပေါ် ကုထုံးများနှင့် ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်ပါသည်။